क्रिकेट विकासमा बाधक : व्यक्तिगत स्वार्थ
विचार क्रिकेट विकासमा बाधक : व्यक्तिगत स्वार्थ
बाह्रखरी - सरोज तामाङ बुधबार, वैशाख ५, २०७५
नेपाली क्रिकेटले करिब तीन करोड जनताको मनमा बास पाएको छ । पछिल्लो समयमा त्यहीअनुसारको नतिजा पनि खेलाडीहरुले ल्याएका छन् । नेपाल अहिले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन सफल भएको छ । यो उपलब्धि दिलाउने खेलाडी राष्ट्रका गहना हुन् । तर खेलाडी नायक बन्न पुग्दा क्यान पदाधिकारी भने खलनायकको रुपमा परिचित भए । यसको पछाडिका कारण धेरै होलान् तर सरसर्ती हेर्दा देखिएको यही हो ।
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)लाई पदाधिकारीले कमाइ खाने भाँडो बनाउँदा नराम्ररी दलदलमा फसेको थियो र अझै छ पनि । क्यान पदाधिकारीले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर राज गर्न खोज्दा क्यान २०७२ सालदेखि निरन्तर क्रिकेटको प्रमुख निकाय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) बाट निलम्वनमा परेको छ ।
यही वैशाख ६ र ७ गते क्यानको विशेष साधारण सभा हुदैछ । यही विशेष साधारण सभाले सम्भवतः नेपाली क्रिकेटको भविष्य कोर्नेछ । किनभने यो विशेष साधारण सभाबाट सल्लाहकार समितिले बनाएको विधान अनुमोदन भए क्यानको निलम्वन फुकुवा, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रको चुनाव गराउने बाटो पनि खुल्छ । त्यसो नभई विशेष साधारण सभाले पुनः एक पटक विधान संशोधन गरेमा करिब ३० वर्षे लामो आईसीसीको सदस्यता नेपालले गुमाउने निश्चितजस्तै छ । यसअघि गत वर्षको माघ १३ गते आईसीसीका उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजासहितको टोली नेपाल आएर क्यान, सल्लाहकार समिति र सरकारसँग छलफल गरेर फर्केका थिए । त्यसबेला नेपाललाई यो अन्तिम मौका भएको भन्दै छिटो विवाद अन्त्य गर्न निर्वाचित क्यानलाई उपाध्यक्ष ख्वाजाले भनेका थिए ।
आईसीसी र क्यानबीचमा निर्वाचित १७ सदस्यीय कार्यसमितिले निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने, क्यानको निर्वाचन गराउन ५ सदस्यीय मनिटरिङ कमिटि बनाउने, सल्लाहकार समितिले बनाएको क्यानको विधान अनुमोदन गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले सल्लाहकार समिति र निर्वाचित क्यानलाई राखेर माघ १६ गते मंगलबार पत्रकार सम्मेलन नै गरी सबै कुरा मिलेको बताएको थियो ।
अझै पनि शंका गर्ने ठाउँ भने प्रसस्तै देखिन्छ । किनभने यसअघि पनि सल्लाहकार समितिसँग पटकपटकको छलफलपछि निर्माण भएको विधान भदौ ६ र ७ गते भएको क्यानको विशेष साधारण सभाले अनुमोदनको साटो संशोधन गरेको थियो । त्यही संशोधनको विषयमा आईसीसीले कडा प्रतिक्रिया जनाउँदै क्यानलाई स्पष्टीकरण नै सोधेको थियो । यसरी अघिल्लो घटनाक्रमलाई नियाल्ने हो भने पनि यसपटक त्यस्तै पवृत्ति नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।
पछिल्लोपटक निर्वाचित क्यानको अभिव्यक्तिले पनि कताकता त्यस्तै घटनाको संकेत गर्छ । वैशाख ४ गते निर्वाचित क्यानले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले हामी जिल्लाका प्रतिनिधिलाई सम्झाउने कोसिस गर्छौँ तर एजीएमले जे भन्छ त्यही हुन्छ भनेका छन् । यो अभिव्यक्तिले आईसीसीसँग भएको सहमति बिर्सेको संकेत दिन्छ ।
गत वर्षको चैत्र ११ गते नेपाली क्रिकेटका चारजना पूर्व कप्तान र वर्तमान कप्तानले नेपाली क्रिकेटको गभर्निङ बडी तत्काल चाहिएको बताउदै क्यानको नेतृत्व गर्न नसके छोडिदिन अनुरोध गरेका थिए । हुन त पूर्व कप्तानहरू र वर्तमान कप्तान चिन्तित बनिनु स्वभाविक नै हो । आईसीसीले पनि क्यानमा स्वच्छ छवि भएका व्यक्ति आउन् र दलगत राजनीति क्यानमा सधैँका लागि अन्त्य होस् भन्नका लागि विधान निर्माणको लागि सल्लाहकार समितिलाई जिम्मा दिएको थियो ।
नेपाल क्रिकेटको विवाद भने पहिले पनि नभएको होइन । तर २०७२ साल मंसिर २८ र २९ गते काठमाडौंमा भएको अधिवेशनपछि विवादले उग्ररुप लिएको थियो । त्यसबेला तत्कालीन उपाध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेललगायतको पक्षले चुनाव गराए भने तत्कालीन अध्यक्ष टंक आङबुहाङको पक्ष भने कोठे निर्णय गरेको भन्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को शरणमा पुगे । आफँै अध्यक्ष भएर आफ्नै संघको समस्या समाधान गर्नतर्फ नलागी आङबुहाङ राखेपलाई गुहार्न पुग्नु लज्जास्पद थियो ।
क्यान निलम्वन हुनुको दोष तत्कालीन अध्यक्ष टंक आङबुहाङ, उपाध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, महासचिव असोशनाथ प्याकुरेल पक्षलाई नै जान्छ । किनभने व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर क्यानको नेतृत्व लिन खोज्दा विवाद देखिएको थियो । त्यो विवाद राखेपसम्म पुगेपछि तत्कालीन सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले वैधानिकता नभएको भन्दै रमेश शिलवालको नेतृत्वमा तदर्थ समिति बनाएका थिए । विष्टले राखेपको सदस्य सचिवको पद भारग्रहण गर्दै गर्दा क्यानको विवाद ३ महिनामा मिलाउने ठोकुवा नै गरेका थिए । तर, उनैले क्यानलाई निलम्वनतर्फ धकेलिदिए । अहिले त्यही कारणले दूर्दशा नेपाली क्रिकेटले भोगी रहेको छ । त्यसपछि आईसीसीले सरकारको हस्तक्षेप मान्य नहुने र क्यानमा विवाद भएको भन्दै निलम्वन गरेको थियो ।
क्यान निलम्बन हुनुको मुख्य दोषी को ? भनिरहनै पर्दैन । तर, यसको निराकरण भने अहिलेसम्म पनि भएको छैन । अझै पनि नेपाली क्रिकेटर र समर्थकलाई चिन्ताकै विषय बनेको छ कतै फेरि विधान संशोधनकै नाटक मञ्चन हुने त होइन ?
नेपालले अहिले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राष्ट्र हो । यो आईसीसीले मायाले दिएको उपलब्धि होइन । यो त नेपाली क्रिकेटरको अथक प्रयास र परिश्रमले हासिल गरेको ऐतिहासिक फड्को हो । तर, यसपछिको पाटो भने क्यानसँग नै जोडिन आउँछ । अहिले क्यान निष्क्रिय रहेको अवस्थामा नेपालले पाएको यो उपलब्धि अब के होला ? टेस्ट नेसन राष्ट्रसँग ५० ओभरको एक दिवसीय खेल खेल्ने हैसियत अहिले नेपालको भएको छ तर क्यान नहँुदा यसको अर्थ के ?
क्यानलाई अन्तिम मौका छ – विशेष साधारण सभाबाट आईसीसीको सल्लाहकार समितिले बनाएको विधान अनुमोदन गरेर नेपाली क्रिकेटलाई जीवित राख्ने । यो विषयमा गम्भीर भएर क्यान लाग्नै पर्छ । निर्वाचित क्यानको नेतृत्व गरेका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द र महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेल इमानदार भएर अघि बढ्नै पर्छ । नत्र क्यानको अस्तित्व यहीँ समाप्त हुनेछ । कुनै लोभ लालच नराखी, व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्यागेर नेपाली क्रिकेटको भविष्य उज्वल बनाउने अहिलेको आवश्यकता हो ।
बुधबार, वैशाख ५, २०७५ मा प्रकाशित
एसियन गेम्समा भाग लिने खेलाडीको दुखेसो– राज्य कहाँ छ ?
अहिलेसम्म कमजोर प्रदर्शन, के होला यसपटक ?
नेदरल्यान्ड्ससँगको खेलमा यी युवा खेलाडीको भर